Taratasim-baovaon’ny RV: Nahazo loka iraisam-pirenena ny Activismo Lenguas noho ny famelomana indray ny tenindrazana. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2021 2:25 GMT
Pikantsary avy amin'ilay tranonkalan'ny Activismo Lenguas
Fanamarihana avy amin'ny Rising Voices: Manome famintinana ireo lahatsoratra am-bilaogy nivoaka farany mikasika ny lafiny rehetra amin'ny fampiatiana nomerika ny taratasim-baovaonay mpivoaka isam-bolana , anatin'izany ny fidirana sy fandraisana ireo fitaovana dizitaly, ary koa ny fomba maro isan-karazany ahafahan'ireo vondrompiaramonina hanararaotra handray anjara feno anaty aterineto.Vakio eto ireo lahatsoratra teo aloha an'ity taratasim-baovaonay ity
Miarahaba ny mpamaky, salama tsara daholo ve ? Manantena aho fa hahita anareo amin'ny toerana tsara ity taratasim-baovaonay ity.
Ankehitriny, mamelà anay ianareo hanokatra ity resaka ity amin'ny vaovao manaitaitra : ny fisantarana andraikitra Activismo Lenguas ato aminay dia vao avy nahazo loka avy amin'ny International Mother Language Institute tao Bangladesh ho fankatoavana ny fandraisanay anjara tamin'ny fiarovana ary fanomezana hery indray ireo fitenin-tompontany ! Tena voninahitra lehibe ho anay no sady fanamarinana ny ezaka fiarahamiasa ataon'ireo mafana fo dizitaly an-jatony mpiaro ny fitenindrazana anaty vondrom-piarahamonin'izy ireo avy izany. Ka noho izany, te hisaotra ireo rehetra nanjohy anay tamin'io dia io nandritra ny taona maro izahay.
Anatin'ireo tetikasa manan-danja rehetra notontosain'ny Activismo Lenguas, dia tianay ny hanasongadina ilay fanentanana anaty haino aman-jery sosialy @ActLenguas izay andalana ankehitriny, ka ifandimbiasan'ireo mpikatroka nomerika amin'ny fiteny tompontany mizara traikefa voalohany amin'izao tontolo izao. Taorian'ny fahombiazany, natodinay tany amin'ny faritra hafa koa ity maodely fanaovana fanentanana ity, toa an'i Afrika, Amerika Avaratra, ary Azia. Azafady mba jerijereo matetika, araho amin'ny tambajotra sosialy izahay, na lazao amin'ny namanao koa ny momba azy ireny — ho faly kokoa izahay hahita anareo any.
HAFA MARO AVY AMIN'NY BILAOGY RISING VOICES
Manaraka izay ihany, andeha isika hijery manokana ny fiteny Uyghur izay tombanana ho olona 10 tapitrisa raha kely indrindra no mbola mampiasa azy ankehitriny, fa mbola miady amin'ny fitazomana izany amin'izao fiainana izao. Mampanontany tena hoe fa maninona, ary amin'ny fomba ahoana no ananan'ny tambajotra sosialy andraikitra miavaka mba hahafahan'izany teny izany ho ela velona ? Vakio ity tantara avy amin'ny Tonian'ny Famoahanan-dahatsoratry ny Global Voices, Filip Noubel ity dia aoka ianao ihany no hahita azy.
Mpamokatra avy amin’ireo firenena ireo ve ianao, miasa amin'ny tetikasa fanadihadiana miaraka amin'ireo mpanatontosa sarimihetsika any amin’ireo firenena ireo ? Ny IDFA Bertha Fund dia mikasa ny hanampy anao hitondra ny tantaranao ho amin'ireo mpijery manerantany, amin'ny alalan'ny fanampiana avy amin'ny IBF Europe International Co-production Support. Azafady anie, jereo ato ny fitsipika ary ny antsipiriany momba ny fisoratana anarana. Farany fisoratana anarana: 1 aprily 2021.
Miasa aminà resaka fanadihadiana lalina mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiantraikan'izany amin'ny fiarahamonina misy anao ve ianao? Manolotra famatsiam-bola 10 ny Earth Journalism Network ho fanohanana ireo mpanao gazety tompontany izay miezaka ny hampandray anjara ny tenindrazana anaty resaka manerantany amin'io sehatra io. Ho hitanao ato [es] [pt] ny fitsipika ary ny antsipiriany momba ny fisoratana anarana . Farany fisoratana anarana : 12Marsa 2021 amin'ny 11:59 (UTC +13)
Manasa olona telo vazimba teratany ny Indian Residential School History and Dialogue Centre , Podcasters (18-30 taona) hanatyevina laharana an-dry zareo anatina andian-tantara mpisavalàlana, ka anatin'izany ireo tanora dia hahazo fiofanana fampiharana momba ny famokarana Podcast mandritry ny valo volana, no sady hihaona amin'ireo zokiolona hiresaka momba ny intergénérationnel – fifandraisan'ny andian-taranaka samyhafa vanimpotoana (ato ny momba izany). Farany fisoratana anarana : 2 Aprily 2021. Fanamarihana : Raisina an-tanandroa avokoa ny fahaiza-manao rehetra.
HETSIKA&TAFA HO AVY
Fotoana izao ho an'ny MozFest 2021 ! Tamin'ny fomba virtoaly ny 8 Martsa no nanaovana io hetsika fanaon'ny Mozilla isan-taona io nandritry ny 12 andro. Mieritreritra ny hanatevin-daharana ireo fokon'olona mitovy firehana ara-kevitra amin'ny fanaovana ny aterineto ho toerana salama kokoa ho an'ny rehetra ? Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa eto ianao ary maka ny ny tapakilanao eto.
Liana hahafantatra bebe kokoa momba ireo fitenin-tompontany atahorana ho very manerantany ? Vao avy nandefa ny arisivany vaovao tamin'ny volana Febroary ny Endangered Languages Archive (ELAR). Mandehana hamarino izany ary zahao izay afaka jerenao ao amin'ny angona nomerikany.
Online Learning Boom Opens New Avenues To Spread Indigenous Languages via NPR
Gwich'in elder learns video call technology to continue teaching language at a distance via CBC
Standup comedian and mother team up for Anishinaabemowin lessons in new podcast via CBC
Where the internet was delivered by a donkey via Rest of World
Internet y pueblos indígenas: muro y oportunidad [es] via DW.COM
Isaorana i Eddie Avila nandray anjara tamin'ity taratasim-baovao ity
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 ora izay
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 ora izay